Yoshitaka Amano no mpanazava ny Final Fantasy | Famoronana an-tserasera
Fanoharana mahagaga an'i Yoshitaka Amano
Azo antoka, raha manomboka amin'ny fanehoan-kevitra aho fa Yoshitaka Amano no meloka tamin'ireny fanoharana lehibe ireny Amin'ireo lalao video an'ny Final Fantasy saga, ny anarany dia hanomboka hanakaiky anao kokoa noho ny lazan'ny lalao RPG izay nanome fialamboly betsaka ho an'ny mpilalao an-tapitrisany eran'izao tontolo izao.
Noho izany antony izany dia mitondra sary nataon'i Amano aho tamin'ny taona 1984 izay tena avo lenta ary mety ho izany jereo ao amin'ny boky kanto antsoina hoe «Maten». Ny antsoina hoe "Knight of Fairy Township" dia namboarina tamin'ny loko rano tamin'ny alàlan'ny tanan'ity mpanao sary ity izay mirakitra ny zavakanto ananany rehetra.
Amano, ankoatry ny famolavolana endri-tsoratra ho an'ny lalao video isan-karazany ao amin'ny Final Fantasy saga, naka sary ihany koa i Sandman: The Dream Hunters, kinovain'ny angano japoney, nosoratan'ilay mpanoratra Neil Gaaiman. Mpana sary iray izay ahitantsika tsipika tena tsara, tarehintsoratra mavokely ary fihetsika mihetsika izay hita amin'ny volo na fitafiana.
Ankoatry ny loko rano dia milaza ihany koa izy a predilection ho an'ny ranomainty India. Ny fanoharany dia azo jerena ao amin'ny Vampire Hunter D avy amin'ny sanganasan'i Hideyuki Kikuchi.
Un tompon'ny loko rano Araka ny hitantsika amin'ny sary lohateny sy toy ny amin'ny sanganasa hafa, dia mamaritra ny tenany ho mpanao sary manokana amin'ny fombany izy, zavatra azo fantarina tokoa raha fantatra ny asany sisa.
Ny sary zaraiko avy amin'ny Child of Light momba ireo andalana ireo dia iray hafa izay maneho ny tanana mahatalanjona ary zavakanto ananan'ity mpanao sary japoney ity izay eo amin'ny ambaratonga lehibe ary inona ny fotoana tokony hisaintsainana an'ity habakabaka ity sy ireo tsipika Creativos Online ireo.
eto adinonay ny Instagramo, Pejy Facebook sy ny hafa, mila mijanona fotsiny amin'ny fivarotana lalao video ianao hahitanao ireo sary sy famolavolana toetra ireo.
Amin'ny lafiny iray manana ohra isikaizaho, izay nandao antsika vao tsy ela akory izay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Fanoharana mahagaga an'i Yoshitaka Amano
Mpamorona sary 10 mila fantatrao
Ireo endrika tsy mampino an'ireo saribakoly noforonin'ny artista rosiana ireo